Ọ bụghị naanị Google - Ọkachamara Semalt na-atụle ihe mere ị ga-eji na-echere ndị ọzọ nchịkwa ọchụchọ
Mgbe ị na-eme e-azụmahịa, SEO bụ ọkpụkpụ azụ nke inweta ndị ahịa n'ụwa dum yana ịbawanye ntọghata nke ndị ọbịa na ndị ahịa. Otú ọ dị, n'ọtụtụ posts, anyị na-ekwu banyere Google nanị mgbe anyị na-ekwu okwu banyere njikarịcha search engine. Ọtụtụ ndị kwesịrị ịmụta na SEO bụ echiche, ọ bụghị usoro, ma nwee ike itinye aka n'ọtụtụ engines ọchụchọ. Ahụmahụ nke ụlọ ọrụ anyị na-ekwenye na iji Google naanị dị ka search engine iji kwado maka bụ mmejọ jọgburu onwe ya. Site na ọtụtụ ebe a na-edebe ebe nrụọrụ weebụ, search engines bụ ụzọ nke ịchọta ndị ahịa n'Ịntanet, ọ bụghị naanị - شركة تنظيف مساجد بالخرج . Google bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ọchụchọ ndị a, nke ga - eme ka ihe kachasị mma.
Dị ka ihe ntanetị internet, nchegbu gị bụ isi bụ ịbịakwute ndị ahịa n'uwa dum site n'iji ịntanetị mee ihe. SEO bu ahia ahia di iche iche nke ihe omimi bu otutu okwu na uzo ha nwere. Nke a pụtara na Google abụghị nanị usoro iji tinye echiche ndị a. Site na nchịkọta, google dị mfe n'ihi na ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ nyocha ma nwee nkọwa zuru ezu gbasara iji ya eme ihe.
Nik Chaykovskiy, Onye Ọrụ Ndị Nlekọta Ndị Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Gbasara Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, kọwaa ihe mere ndị ahịa ahịa na-eji elee anya na-eche n'echiche karịrị usoro nke engines ọchụchọ.
È Nwere Ebe Ndị Ọzọ?
Google abụghị naanị ebe ị nwere ike depụta ihe gị. Nnukwu ụlọ ọrụ dị ka Alibaba amụtala echiche a ma tinye ya n'ọrụ. Ha emeela nke ọma ma guzobe ikike dị ịrịba ama na niche ha..Ha nwere ọnụnọ ntanetị siri ike. N'agbanyeghị nke ahụ, ebe nrụọrụ weebụ ha nwere okporo ụzọ kpọmkwem nke na-esiteghị na engines ọchụchọ. Nke a pụtara na iji Google naanị nwere ike bụrụ njedebe maka mgbalị SEO gị. Dịka ọmụmaatụ, mmadụ nwere ike ịga Alibaba ozugbo iji chọpụta ihe otu onye na site na Google. Iji jiri echiche a, ị nwere ike iji:
Amazon na eBay.
Ọtụtụ ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ịchọta ihe na eBay. Ụgbọ okporo ụzọ a anaghị eche echiche na engines ọchụchọ. Onye dị mma online marketer ga-edepụta ihe ha na niche ndị a dị ka Google. Ụmụaka SEO na-arụ ọrụ na weebụsaịtị ndị a. Dị ka ọmụmaatụ, aha ngwaahịa, oyiyi, na nkọwa nwere ike ịgụnye isiokwu. Amazon nwere mmemme nke mmemme nke nwere ike inye ndị ọzọ ọrụ ahịa ọrụ na ihe ị na-ere.
Ngwá ọrụ ndị ọzọ ọchụchọ.
Mgbe ị na-eme SEO, enwere niche ndị ọzọ ị nwere ike iji gaa ahịa ndị ọzọ. Dị ka ọmụmaatụ, ọtụtụ ndị na-ede blọgụ achọtawo iji Bing na Yahoo iji kpọta ndị ahịa ọ bụla. Ọ bụghị mmadụ niile na-ezo aka na Google maka ajụjụ ọchụchọ. Site na ndepụta nke ọtụtụ blọọgụ, okporo ụzọ ndị ọzọ search engines nwere ike iweta ụfọdụ n'ime ahịa ndị kasị baa uru.
Dịka iwu, SEO ọdịnaya dị na Google. Ọtụtụ ndị nwere ike iche ma ọ dị mkpa iji bulie weebụsaịtị maka Google naanị. Google naanị abụghị naanị search engine na ikike nke ịba uru na saịtị gị. N'ọtụtụ ọnọdụ, Google bụ nnukwu search engine. Otú ọ dị, dijitalụ marketer n'ọnọdụ dịkarịsịrị karịa Google naanị. Onye na-eche na ọ naghị achọ engines ọchụchọ mgbe ị na-eme ahịa n'ịntanetị. Nke a pụtara na SEO bụ echiche nke nwere ike ibelata ọtụtụ nzụlite ịntanetị.